Tag: xariir | Martech Zone
Xariir: Xogta iyo Waraaqaha u rogo Muuqaallo la daabacay
Axad, Juun 19, 2015 Axad, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Weligaa waligaa ma laheyd warqad xaashiyeed oo uruurisay xog aad u qurux badan oo aad kaliya dooneysay inaad aragto - laakiin tijaabinta iyo qaabeynta jaantusyada ku dhex jira gudaha Excel ayaa aad u dhib badnaa oo waqti badan ku qaadanayay? Kawaran haddii aad dooneysid inaad ku darto xog, maareeyso, geliso oo xitaa aad wadaagto muuqaaladaas? Waxaad ku sameyn kartaa Xariir. Xariirku waa madal daabacaad xog ah. Xariirradu waxay ka kooban yihiin xog ku saabsan mowduuc gaar ah. Qof kasta ayaa daadin kara Xariir si uu u baadho